မိနျးမသားမြား မကျြနှာပွငျ နုပြိုဖို့ဆိုရငျ - Barnyar Barnyar
မိနျးမသားမြား မကျြနှာပွငျ နုပြိုဖို့ဆိုရငျ
February 27, 2022 အလှအပရေးရာ 0
မကျြနှာပွငျ အသားအရေ ဟာ မိနျးမသား တှေ အတှကျ အလှနျ အရေးကွီးတဲ့ အဓိက အခကျြလို့ ဆိုရငျ မမှားပါဘူး ။ မကျြနှာပွငျ အသားအရကေို မထိနျးသိမျးမိဘူး ဆိုရငျ အရှယျ မတိုငျခငျ ရငျ့ရျောမှုတှေ ဖွဈတတျ ပါတယျ ။
နရေောငျခွညျကွောငျ့ အသားအရကေို ထိခိုကျတာရယျ ပတျဝနျးကငျြ အကွောငျး အခကျြတှကွေောငျ့ ရလာတဲ့ ဓာတျတိုးပစ်စညျးတှကွေောငျ့ ထိခိုကျတာရယျ ဖွဈတတျ ပါတယျ ။
အခြို့အသကျကွီး သျောလညျး အသားအရေ မပကျြစီးပဲ တောကျပ နုပြို နတောဟာ သဘာဝက ပေးတဲ့ အသားအရေ ထိနျးသိမျးနညျးတှေ ကွောငျ့ပါ ။ ဒါဆိုရငျ သဘာဝက ဘယျလိုမြိုးမြား အသားအရေ တောကျပမှုကို ပေးသလညျး ဆိုတာကို ပွောပွခငျြပါတယျ ။
” ပြားရညျနဲ့ အသားအရေ ”
ပြားရညျဟာ သငျ့ အသားအရညျ အတှကျ အကောငျးဆုံးသော သဘာဝ ပစ်စညျး တဈမြိုးပါ ၊ ပြားရညျမှာ အရပွေားကို ပွနျလညျ ကောငျးမှနျစနေိုငျတဲ့ အငျတီအောကျဆီဒငျ့တှေ ပါဝငျပွီး ဘကျတီးရီးယားကို ကငျးစတေဲ့ အာနိသငျလညျး ပါဝငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ပြားရညျကို မကျြနှာသနျ့စငျ ဆေးအဖွဈလညျး အသုံးပွု နိုငျပါတယျ ။
ပြားရညျ အနညျးငယျ ရနှေေးအနညျးငယျတို့ကို ရောပွီး သမသှားသညျအထိ မှပေါ ၊ ထို့နောကျ မကျြနှာပျေါမှာ သုတျလိမျးပေးပါ ။
မကျြနှာပွငျမှာ ရှိနတေဲ့ ခြေးမြားကို သနျ့စငျဖို့ ဆိုရငျတော့ သကွားအညိုကို ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျးခနျ့ ထညျ့ပေးပါ ။ မကျြနှာပွငျပျေါ သုတျလိမျးပွီး ဆယျမိနဈခနျ့ ထားပွီးနောကျ ရဖွေငျ့ သနျ့စငျပေးပါ ။ ထူးခွားတောကျပတဲ့ အသားအရကေို သငျရရှိ ပါလိမျ့မယျ ။
” ထောပတျသီးနဲ့ သဘာဝဆေး ”
အသားအရေ နုးညံ့ ခြောမှနေ့စေရေနျ ဘီတာမငျ ဓာတျတှဟော မရှိမဖွဈ လိုအပျ ပါတယျ ။ထောပတျသီးမှာ ဘီတာမငျ အေ၊ ဘီ ၊ ဒီ နဲ့ အီးတို့ မြားစှာ ပါဝငျ ပါတယျ ။ ကနျြးမာရေးကို အားဖွညှမဲ့ အဆီဓာတျတှေ ပါဝငျ သလို ပိုတကျဆီယမျ ပါဝငျမှူဟာ ငှကျပြောသီး တဈလုံးမှာထကျ ပိုပါတယျ ။
သဘာဝအရ အစိုဓာတျကို မြားစှာ ထိနျးနိုငျပါတယျ ။ ထောပတျသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ သဘာဝ အဆီဓာတျတှဟောမကျြနှာပွငျက အညဈအကွေးတှကေို ဖယျရှားပေးပွီး ပါးရတှေနျ့ခွငျး အိုမငျးခွငျး လက်ခဏာတို့ကို လြော့ကြ စပေါတယျ ။
နှငျးခူနာ အနီရောငျ အစကျအပြောကျနဲ့ ထိလှယျ ခိုကျလှယျတဲ့ အသားအရအေတှကျ ကုသရာမှာအကောငျးဆုံး သဘာဝ ပစ်စညျး ဖွဈပါတယျ ။
ထောပတျသီးအမှညျ့ တဈလုံးကို ကညြေကျသညျထိ ကွိတျခပြေါ၊ မကျြနှာပွငျပျေါ ညငျညငျသာသာလိမျးပါ၊ ဆယျမိနဈ အကွာမှာ အေးမွစိုစှတျတဲ့ အစသနျ့သနျ့နဲ့ ပွနျသုတျလိုကျပါ ၊ အစိုဓာတျ ပိုမိုရရှိစလေိုပါက နှားနို့သို့မဟုတျ ပြားရညျအနညျးငယျ ထညျ့ပွီး သုတျလိမျး ပေးပါ ။
ထောပတျသီးဟာ မကျြနှာပေါငျးတငျတဲ့ အခါ မကျြနှာပွငျ အသားအရကေို ကောငျးကြိုးပွညျ့ဝစှာ ပေးနိုငျစှမျး ပါတယျ ။
” သင်ျဘောသီးကလညျး အခရာ ”
သဘာဝအရ သင်ျဘောသီးမှာ ဘီတာမငျစီနဲ့ ကယျရိုတငျး ဓာတျတို့ ပါဝငျပါတယျ ။ သတ်ထုဓာတျနဲ့ ပကျပိနျးအငျဇိုငျးပါဝငျမှုမြား တာမို့ အစိုဓာတျကို ထိနျးသိမျးနိုငျပွီး အသားအရေ ခြောမှစေ့ပေါတယျ ။အစကျအပြောကျမြားကီု လြော့ပါးစပွေီး အသားအရေ တောကျပစပေါတယျ။ ခြှေးပေါကျပိတျမှုကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ ။
သင်ျဘောသီးမှညျ့ရဲ့အနှဈကို ကွညေကျအောငျပွုပွီး မကျြနှာပွငျပျေါမှာ စကျဝိုငျ သဏ်ဍာနျ လှညျ့လညျနှိပျနယျပွီးသုတျပေးပါ။ လိမျးရုံမက စားသုံးပေးခွငျးကလညျး အကြိုးထိရောကျမှုကို ရရှိပါတယျ။ အမြှငျဓာတျပိုတကျစီယမျနဲ့ဘီတာမငျ အေ၊ စီတို့ပါဝငျခွငျးကွောငျ့အသားအရေ နုညံ့တောကျပမှု အကြိုးကိုအပွညျ့အဝ ရရှိစမှော ဖွဈပါတယျ ။
အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးမှ ကငျးဝေးကာ အသားအရရေဲ့ ကောငျးခွငျးကို ရရှိမှာမို့ ဒီနပေဲ့ သဘာဝအလှပွငျပစ်စညျးမြားကို သုံးစှဲကညျ့ကွပါစို့….
မိန်းမသားများ မျက်နှာပြင် နုပျိုဖို့ဆိုရင်
မျက်နှာပြင် အသားအရေ ဟာ မိန်းမသား တွေ အတွက် အလွန် အရေးကြီးတဲ့ အဓိက အချက်လို့ ဆိုရင် မမှားပါဘူး ။ မျက်နှာပြင် အသားအရေကို မထိန်းသိမ်းမိဘူး ဆိုရင် အရွယ် မတိုင်ခင် ရင့်ရော်မှုတွေ ဖြစ်တတ် ပါတယ် ။
နေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရေကို ထိခိုက်တာရယ် ပတ်ဝန်းကျင် အကြောင်း အချက်တွေကြောင့် ရလာတဲ့ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် ထိခိုက်တာရယ် ဖြစ်တတ် ပါတယ် ။
အချို့အသက်ကြီး သော်လည်း အသားအရေ မပျက်စီးပဲ တောက်ပ နုပျို နေတာဟာ သဘာဝက ပေးတဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းတွေ ကြောင့်ပါ ။ ဒါဆိုရင် သဘာဝက ဘယ်လိုမျိုးများ အသားအရေ တောက်ပမှုကို ပေးသလည်း ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။
” ပျားရည်နဲ့ အသားအရေ ”
ပျားရည်ဟာ သင့် အသားအရည် အတွက် အကောင်းဆုံးသော သဘာဝ ပစ္စည်း တစ်မျိုးပါ ၊ ပျားရည်မှာ အရေပြားကို ပြန်လည် ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်တွေ ပါဝင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားကို ကင်းစေတဲ့ အာနိသင်လည်း ပါဝင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပျားရည်ကို မျက်နှာသန့်စင် ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြု နိုင်ပါတယ် ။
ပျားရည် အနည်းငယ် ရေနွေးအနည်းငယ်တို့ကို ရောပြီး သမသွားသည်အထိ မွှေပါ ၊ ထို့နောက် မျက်နှာပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပေးပါ ။
မျက်နှာပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ ချေးများကို သန့်စင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ သကြားအညိုကို ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် ထည့်ပေးပါ ။ မျက်နှာပြင်ပေါ် သုတ်လိမ်းပြီး ဆယ်မိနစ်ခန့် ထားပြီးနောက် ရေဖြင့် သန့်စင်ပေးပါ ။ ထူးခြားတောက်ပတဲ့ အသားအရေကို သင်ရရှိ ပါလိမ့်မယ် ။
” ထောပတ်သီးနဲ့ သဘာဝဆေး ”
အသားအရေ နုးညံ့ ချောမွေ့နေစေရန် ဘီတာမင် ဓာတ်တွေဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ် ပါတယ် ။ထောပတ်သီးမှာ ဘီတာမင် အေ၊ ဘီ ၊ ဒီ နဲ့ အီးတို့ များစွာ ပါဝင် ပါတယ် ။ ကျန်းမာရေးကို အားဖြညွမဲ့ အဆီဓာတ်တွေ ပါဝင် သလို ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်မှူဟာ ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးမှာထက် ပိုပါတယ် ။
သဘာဝအရ အစိုဓာတ်ကို များစွာ ထိန်းနိုင်ပါတယ် ။ ထောပတ်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝ အဆီဓာတ်တွေဟာမျက်နှာပြင်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပါးရေတွန့်ခြင်း အိုမင်းခြင်း လက္ခဏာတို့ကို လျော့ကျ စေပါတယ် ။
နှင်းခူနာ အနီရောင် အစက်အပျောက်နဲ့ ထိလွယ် ခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေအတွက် ကုသရာမှာအကောင်းဆုံး သဘာဝ ပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ထောပတ်သီးအမှည့် တစ်လုံးကို ကျေညက်သည်ထိ ကြိတ်ချေပါ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ် ညင်ညင်သာသာလိမ်းပါ၊ ဆယ်မိနစ် အကြာမှာ အေးမြစိုစွတ်တဲ့ အစသန့်သန့်နဲ့ ပြန်သုတ်လိုက်ပါ ၊ အစိုဓာတ် ပိုမိုရရှိစေလိုပါက နွားနို့သို့မဟုတ် ပျားရည်အနည်းငယ် ထည့်ပြီး သုတ်လိမ်း ပေးပါ ။
ထောပတ်သီးဟာ မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့ အခါ မျက်နှာပြင် အသားအရေကို ကောင်းကျိုးပြည့်ဝစွာ ပေးနိုင်စွမ်း ပါတယ် ။
” သင်္ဘောသီးကလည်း အခရာ ”
သဘာဝအရ သင်္ဘောသီးမှာ ဘီတာမင်စီနဲ့ ကယ်ရိုတင်း ဓာတ်တို့ ပါဝင်ပါတယ် ။ သတ္ထုဓာတ်နဲ့ ပက်ပိန်းအင်ဇိုင်းပါဝင်မှုများ တာမို့ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး အသားအရေ ချောမွေ့စေပါတယ် ။အစက်အပျောက်များကီု လျော့ပါးစေပြီး အသားအရေ တောက်ပစေပါတယ်။ ချွေးပေါက်ပိတ်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။
သင်္ဘောသီးမှည့်ရဲ့အနှစ်ကို ကြေညက်အောင်ပြုပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ စက်ဝိုင် သဏ္ဍာန် လှည့်လည်နှိပ်နယ်ပြီးသုတ်ပေးပါ။ လိမ်းရုံမက စားသုံးပေးခြင်းကလည်း အကျိုးထိရောက်မှုကို ရရှိပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ပိုတက်စီယမ်နဲ့ဘီတာမင် အေ၊ စီတို့ပါဝင်ခြင်းကြောင့်အသားအရေ နုညံ့တောက်ပမှု အကျိုးကိုအပြည့်အဝ ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကာ အသားအရေရဲ့ ကောင်းခြင်းကို ရရှိမှာမို့ ဒီနေ့ပဲ သဘာဝအလှပြင်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲကည့်ကြပါစို့….
Hits Today : 9087
Total Hits : 318795